हिजो भएको श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट रहस्य खुल्यो, यस्तो छ खास कारण ? — Motivatenews.Com
हिजो भएको श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट रहस्य खुल्यो, यस्तो छ खास कारण ?
काठमाडौं – आइतबार भएको सृखलाबद्ध बम विस्पोटको नयाँ रहस्य खुलेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार विप्लव कार्यकर्ताले टाइमर मिलाउन नजाँदा अघिल्लो बेलुकी नै विस्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सोमबार बिहान ४ः१५ मा विस्फोट गर्नेगरी टाइम सेट गर्दा आइतबार बेलुका ४ः१५ मा विस्फोट भएको प्रहरी भनाइ छ । आइतबार राजधानीको सुकेधारा, घट्टेकुलो र थानकोटमा बम विस्फोट भएका थिए । जसमा ४ जनाको ज्यान जानुको साथै ७ जना घाइते छन् । ४ स्थानमा भने समयमै डिस्पोज गरिएको छ ।
सोमबारको बन्द सफल पार्न त्यसअघि नै आतंक सिर्जना गर्न विप्लव नेतृत्वको समूहले श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराएको हो ।
विस्फोटका घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै सुरक्षा निकायलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बताएका छन ।